Doorashadda Puntland: Dimuqraadiyad shaar qabiil xiran | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashadda Puntland: Dimuqraadiyad shaar qabiil xiran
Sidee urur siyaasadeed ayaa u tartamaya kuraasta gollayaasha degaanka saddex degmo oo kamid ah Puntland, waxayna codeynta soconaysaa hal maalin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Puntland ayaa Maanta u dareertay goobaha codbixinta doorashada Gollaha degaanka, taasoo ay ku tartamayaan sideed Urur siyaasadeed oo diiwaangashan.
Saddex degmo oo kala ah Qardho, Ufeyn iyo Eyl ayay ka dhacaysaa doorashadda oo ah mid tijaabo ah, oo aan ka dhacaynin dhamaan degaanada Puntland, oo ka kooban 3 gobol.
Dad gaaraya 37,578 ayaa codeynaya kuwaasoo helay kaararka codbixinta ay bixisay TPEC, oo ah Gudiga KMG ee doorashooyinka Puntland oo dhaqaala badan ku qaatay doorashadda.
Goobo gaaraya 54 ayaa la dhigay sanaadiiqda codbixinta, waxayna doorashadda billaabatay 6:00 AM subaxnimo, waxayna soo xirmaysaa 6:00PM maqribkii, sida ay sheegtay TPEC.
Musharixiin gaaraya 499 ayaa u tartamaya kuraasta gollayaasha degaanka oo ah 87, waxayna doorashadda qof iyo codka ah ee Puntland ka socoto noqonaysaa midii ugu horeysay oo 52 sano kadib ka dhacaysa Soomaaliya, marka laga reebo Somaliland oo iyadu sheegatay inay ka go'day dalka 1991.
Dhinaca kale marka laga eego doorashadda Puntland waa mid qabiil ku saleysan oo sidii horey xukunka wareegto ugu ahaa saddexda Jufo ee Beesha Majeerteen - Cumar Maxamuud, Cismaan Maxamuud iyo Ciise Maxamuud, oo kala dega gobollada Nugaal, Bari iyo Karkaar.
Madaxweynaha talada haya Deni ayaa hogaaminaya Urur siyaasadeedka Kaah, oo ku awood badan gobolka uu kasoo jeeda ee Karkaar, gaar ahaan Qardho, halka Eyl oo Nugaal ah oo ku xoog badan yahay Urur Siyaasadeedka Horseed oo uu leeyahay Faroole.
Intii ay jirtay Maamulka Puntland tan iyo 1998, saddex jufa ayaa isku wareejisa xilka Madaxweynaha, waxaana ku dulman jufooyin badan oo awood qeybsiga laga qadiyay, kuwaasoo degan beelaha ugu soo wax saarka badan, sida gobolka Bari.
Urur siyaasadeed walba wuxuu codadka ugu badan ka helayaa degmada uu jufo ahaan kasoo jeedo, taasoo ka dhigaysa doorashadda Puntland mid ku saleysan qabiil, laakiin loo geliyay shaar dimuqraadi ah. Soomaaliya qabiilka ayaa ku weyn dadkeeda.